N'ebe ndị a na-eru nso n'ime akwụkwọ a-omume na-ahụ anya (isi nke 2) na ịjụ ajụjụ (isi nke 3) - ndị nyocha na-anakọta data n'echeghị echiche ma na-agbanwe agbanwe ụwa. Ụzọ a ga-esi kpuchie ya na ntinye akwụkwọ ndị a-bụ nke dị iche iche. Mgbe ndị na-eme nchọpụta na-agba ọsọ, ha na-etinye aka n'usoro n'ụwa iji mepụta data nke dabara adabara iji zaa ajụjụ gbasara mmekọrịta na-akpata.
Ajụjụ ndị na-akpata na-emetụtakarị na nchọpụta mmadụ, ihe atụ na-agụnye ajụjụ ndị dị ka: Ọganihu ndị nkụzi na-arị elu na-amụba mmụta nke ụmụ akwụkwọ? Kedu ihe ọ ga-eme ma ọ bụrụ na ị ga-akwụ ụgwọ dị nta karịa ụgwọ ọrụ? Kedu otu agbụrụ onye na-achọ ọrụ si emetụta ohere ọ ga-enweta ọrụ? Na mgbakwunye na ajụjụ ndị a kpatara doro anya, mgbe ụfọdụ, ajụjụ ndị kpatara-na-mmetụta dị iche iche na-agbakwụnye n'ozuzu gbasara ajụjụ banyere mmelite nke ụfọdụ metric arụmọrụ. Dịka ọmụmaatụ, ajụjụ bụ "Olee ụdị ụcha nke bọtịnụ ga-adịrị na ebe nrụọrụ weebụ NGO?" Bụ ọtụtụ ajụjụ gbasara mmetụta nke bọtịnụ dị iche iche na onyinye.
Otu ụzọ isi zaa ajụjụ ndị kpatara-na-emetụta bụ ịchọta ihe omume na data dị. Dịka ọmụmaatụ, n'ịzaghachi ajụjụ banyere utịp nke ndị nkụzi na mmụta nke ụmụ akwụkwọ, ị nwere ike ịgbakọ ka ụmụ akwụkwọ ahụ mụtakwuo ihe n'ụlọ akwụkwọ ndị na-enye ndị ọrụ nkuzi dị elu. Mana, nke a na-egosi na ụgwọ dị elu na- eme ka ụmụ akwụkwọ mụtakwuo? Ọ bụghị n'ezie. Ụlọ akwụkwọ ebe ndị nkụzi nwere ego nwere ike ịdị iche n'ọtụtụ ụzọ. Dịka ọmụmaatụ, ụmụ akwụkwọ nọ n'ụlọ akwụkwọ nwere ụgwọ ọrụ ndị nkụzi dị elu nwere ike si n'ezinụlọ ndị bara ọgaranya. Ya mere, ihe dị ka mmetụta nke ndị nkuzi nwere ike ịpụta site n'ịtụle ụdị ụmụ akwụkwọ dị iche iche. A na - akpọ ndịrịrịrịrị iche iche n'etiti ụmụ akwụkwọ ndị na - atụgharị uche , na, n'ozuzu ha, ohere nke ndị na - atụgharị uche na - emebi ihe ndị na - eme nchọpụta nwere ike ịza ajụjụ ndị kpatara-na-ahụ site n'ịchọ usoro n'ime data dị.
Otu ngwọta maka nsogbu nke ndị mgbagwoju anya bụ iji gbalịa ime ihe atụ ziri ezi site n'ịgbanwe maka esemokwu dị iche iche n'etiti otu. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịnwe ike ibudata data ụtụ isi site na ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike iji nyocha ụmụ akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ ebe ọnụahịa ụlọ dị ka nke ahụ, ma ụgwọ ọrụ ndị nkụzi dị iche, ị ka nwere ike ịhụ na ụmụ akwụkwọ na-amụtakwu ihe n'ụlọ akwụkwọ na-akwụ ụgwọ ndị nkụzi ka elu. Ma a ka nwere ọtụtụ ndị na-atụgharị uche. Eleghi anya nne na nna nke ụmụ akwụkwọ ndị a dịgasị iche na ọkwa ha. Ma ọ bụ ma eleghị anya, ụlọ akwụkwọ dị iche iche na ha dị nso na ụlọ akwụkwọ ọhaneze. Ma ọ bụ ma eleghị anya, ụlọ akwụkwọ ndị ọkachamara na-akwụ ụgwọ na-akwụ ụgwọ dị elu maka ndị isi, ụgwọ ụgwọ isi, ọ bụghị ụgwọ ndị nkụzi, bụ n'ezie ihe mmụta mmụta na-amụba amụba. Ị nwere ike gbalịa ịtụle ma gbanwee maka ihe ndị a kwa, ma ndepụta nke ndị kwere ekwe na-atụgharị uche bụ nke na-adịghị agwụ agwụ. N'ọtụtụ ọnọdụ, naanị ị gaghị enwe ike ịlele ma gbanwee maka ndị niile nwere ike ịgbagha. Na nzaghachi nke ihe ịma aka a, ndị na-eme nchọpụta emepewo ọtụtụ usoro maka ịmepụta atụmatụ ezumike site na data ndị na-abụghị nke nnwale - m na-atụle ụfọdụ n'ime ha na isi nke 2-mana, maka ụfọdụ ụdị ajụjụ, usoro ndị a na-ejedebe, na ịnweta nkwenye ọzọ.
Nlereanya mere ka ndị na-eme nchọpụta nwee ike ịgafe karịa mmekọrịta na ihe omume nke na-emekarị iji nwee ike ịza ajụjụ ụfọdụ na-akpata na-emetụta. N'ime oge analog, enwere ihe siri ike ma dị oke ọnụ. Ugbu a, na oge dijitalụ, ihe mgbochi logistical ji nwayọọ nwayọọ na-apụ. Ọ bụghị naanị na ọ dị mfe ịme nyocha dị ka ndị ahụ mere n'oge gara aga, ọ bụ ugbu a ka ọ ga-ekwe omume ịgba ọsọ dị iche iche.
Na ihe mdere ugbu a, enwere m ihe rụrụ arụ n'asụsụ m, ma ọ dị mkpa ịmata ọdịiche dị n'etiti ihe abụọ: nyocha na nchịkwa a na-achịkwa. N'ime nnyocha , onye na-eme nchọpụta na-abata n'ụwa ma mesie ihe ga-esi na ya pụta. Anụla m ụdị nke a kọwara dịka "na-echegharị ma na-ahụ." N'ọchịchị a na-achịkwa nke ọma, otu onye na-eme nchọpụta na-emechitere ụfọdụ ndị ma ọ bụghị maka ndị ọzọ, onye nchọpụta ahụ na-ekpebi onye ndị mmadụ na-enweta enyemaka ahụ site na ịkọwapụta (dịka eghe mkpụrụ ego). Nlekọta ndị a na-achịkwa ahazi na-eme ka ịkọwa ihe dị mma n'etiti ìgwè abụọ: otu onye natara enyemaka na nke na-adịghị. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ihe ndị a na-achịkwa n'ọchịchịrị bụ ihe ngwọta maka nsogbu nke ndị na-atụgharị uche. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị chọpụta na ị ga-achọpụta, ọ ga-agụnye naanị otu ìgwè nke natara ya, ya mere, ihe ndị ahụ nwere ike iduga ndị nchọpụta na-ezighị ezi (dị ka m ga-egosi n'oge na-adịghị anya). N'agbanyeghi ihe di iche iche di iche iche n'agbata nyocha na ugbua a na-ejide n'aka ndi mmadu, ndi nyocha banyere ndi mmadu na-ejikarị okwu ndia eme ihe. Aga m agbaso mgbakọ a, mana, na ụfọdụ isi, m ga-agbaji mgbakọ ahụ iji mesie uru nke nchịkwa ndị a na-achịkwa nyocha na-enweghị usoro n'enweghị randomization na otu njikwa.
Nyocha ndị a na-ejighị n'aka na-egosi na ị bụ ụzọ dị ike ị ga-esi mụta banyere ọha mmadụ, na isi nke a, m ga-egosi gị ihe gbasara otu esi eji ha mee nchọpụta gị. Na nkebi nke 4.2, m ga-egosiputa isi ihe nke nnwale na ihe atụ nke nnwale na Wikipedia. Mgbe ahụ, na mpaghara nke 4.3, m ga-akọwa ọdịiche dị n'etiti nyocha ụlọ nyocha na nyocha nke ubi na ọdịiche dị n'etiti nnyocha analog na nyocha dijitalụ. Ọzọkwa, m ga-arụ ụka na ịnweta ule di iche iche nwere ike inye atụmatụ kachasị mma nke nyocha ụlọ analog (njide siri ike) na nyocha ugwo analog (ihe omimi), ihe niile dị n'ọtụtụ na-agaghị ekwe omume na mbụ. Ọzọ, na mpaghara 4.4, m ga-akọwa nchịkọta atọ-nkwado, nchịkọta dị iche iche nke ọgwụgwọ, na usoro-ndị dị oké egwu maka ịmepụta ihe bara ụba. Na nzụlite a, m ga-akọwa ndị ahịa na-esonye n'ime ụzọ abụọ bụ isi maka iduzi nchọpụta dijitalụ: na-eme ya n'onwe gị ma ọ bụ na-esonyere ndị dị ike. N'ikpeazụ, m ga-ejedebe ndụmọdụ ụfọdụ gbasara ndụmọdụ gbasara ụzọ ị ga - esi jiri ike dị ike nke nchọpụta dijitalụ (ngalaba 4.6.1) ma kọwaa ụfọdụ ọrụ na - abịa na ike ahụ (ngalaba 4.6.2).